संयमित बनौ, योगदान नबिर्सौ !
ictsamachar.com . ४ महीना अघि
एकजना साथीले आज मजाक गर्दै सुनाए, ’कोरोना विरुद्ध हात धुनु भनेको त मान्छेहरु इसेवाविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् ।’ सुन्दा एकछिन त रमाइलो लाग्यो तर विषय गम्भीर थियो । हिजोआज कोरोनाको कहरसँगै स्वास्थ स...
काठमाडौं - डाटासम्बन्धी काम गर्ने एक्सटेन्सो डाटामा आबद्ध अस्गर अलीको पहुँचका कारण सरकारी डाटा दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ। काठमान्डु प्रेस अनलाइनलाई अनधिकृत कब्जा गरेर समाचार हटाइएपछि अलीले सरकारी...
चैत्र २१, काठमाडौं । पेमेण्ट गेटवे इसेवाले ‘काठमाडौं प्रेस’ नामक न्युज पोर्टलको समाचार हटाइएकोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । आज (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इसेवाले समाचार हटाइएकोमा ...